Shiinaha Shiinaha 5inch Electric Rotary Gawaarida Mashiinka Nadiifinta CHE-C6866 soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Checheng
Mashiinka ugu dambeeya ee 5inch Electric Rotary Gawaarida Nadiifinta CHE-C6866
Shayga MAYA: CHE-C6866
Adeegsiga: Tafaasiisha Gawaarida
Nalalka wareegga ah ee wareegga 5inch waxaa loogu talagalay shaqooyinka ugu adag. Mashiin koronto oo si gaar ah loo soo xulay oo leh awood sare oo 1000W ah iyo 4 gear oo gudbisa xujooyin waa weyn ayaa u oggolaanaya saacado adag, saacado badan oo shaqo ah oo leh walxaha ugu baahida badan. Marka loo barbardhigo kuwa kale ee wax lagu nadiifiyo, way u adkeysataa cadaadiska. Intaa waxaa sii dheer, waxay ku qalabeysan tahay dhammaan jaangooyooyinka NSK ee Japan, kicinta horusocodka leh ee xakamaynta xawaaraha, jilicsanaanta bilowga iyo nidaamka xawaaraha joogtada ah waxay mashiinkeenna ka dhigeysaa mid ku habboon, raaxo leh, si wanaagsan isugu dheellitiran oo xasilloon inta lagu jiro isticmaalka. Xakamaynta xawaaraha suulka ee ku shaqeeya waxay siisaa xakamaynta xawaaraha isbeddelka laga bilaabo 700 illaa 2500 RPM. Waxay leedahay dunmiiqa M14 ee caadiga ah, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon taarikada taageerada badan ee suuqa. Ergonomics-ka sareeya wuxuu hubiyaa shaqo raaxo leh, makiinadan wax lagu beddelo waxay bixisaa socod qabow oo loogu talagalay shaqooyinka waaweyn ee nadiifinta ah.
No Xawaare Load:
3.0 mitir xadhig koronto
1pc 5in saxan taageero, 1pc kwo, 1pc xamili dhinaca, 1pc Buugga, 1pc bar kordhin,
Burushka kaarboon 1pr
1.Waxaa lagu qalabeeyaa dhamaan Jaranjarada NSK ee Japan iyo 4 gears, waxay ka dhigeysaa gariir aad u hooseeya oo u adkeysanaya cadaadiska
2. Kicinta isbeddelka horumarka, kicinta ayaa sidoo kale xakameyn karta dejinta xawaaraha 6 taas oo ka dhigaysa mid aad ugu habboon inta lagu jiro shaqada.
Mashiinka 1000watt ee awooda leh wuxuu si wax ku ool ah uga saaraa cilladaha dhaqso.
Nidaamka xawaaraha 4.Constant leh shaqada bilowga jilicsan.
5.Xuddunta sare, miisaanka fudud oo si wanaagsan isu dheellitiran
Mashiinka culus ee culus wuxuu bixiyaa awood sare.
7.Extra culus oo culus M14 (5/8 ") dunmiiqa leh qufulka dunmiiqa.
8.Soft xajinta dahaarka daboolan iyo xamili, raaxo badan.
9.Karboodyada dhinaca burushka kaarboonku waxay u fududeeyaan isticmaalayaasha inay beddelaan burushka kaarboonka.
Burushyada kaarboonka xiran ee iska-joojinta ka-hortagga dhaawaca gaariga.
11.Shallan 100% kubbadda qaadista waxay bixisaa nolol dheeri ah.
Hore: Qalab cusub oo 1000watt Rotary Polisher ah oo lagu nadiifiyo Gawaarida CHE-C6800
Xiga: 5inch Car Polishher Polishing Machine Mashiinka 8mm Auto Wax Kaydinta DF8A